မန္တလေးမြို့ကို သိက္ခာချ နေသော မန္တလေး တောင်မှ ဓာတ်ပုံဆရာ – WunYan
whuk-46651 | October 17, 2017 | Social Media | No Comments
ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေ ၃ယောက်ကို ယနေ့ မန္တလေးတောင် ကိုအလည်လိုက်ပို့ခဲ့ပါတယ် ခြေထောက်နာ နေလို့တောင်ထိပ်ကို လိုက်မပို့ဖြစ်ခဲ့ပါ.
တောင်တက်ဂိတ် မှာမေးတဲ ဓာတ်ပုံ ဆရာ ကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်ဖို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်. .မိတ်ဆွေ တွေကိုလည်း အမှတ်တရဖြစ်အောင် ပုံသေး ၅ ပုံလောက်ဘဲရိုက်ပါ . . .တစ်ပုံကို ဆိုဒ်ပေါ်မူတည်ပြီး ၇၀၀ /၁၅၀၀ လောက်ဘဲရှိတယ်ပြောပြီး ဓာတ်ပုံ ဆရာ ကို ၅ ပုံလောက်ဘဲရိုက်ပေးဖို့ကျွန်တော်မှာလိုက်ပါသေးတယ်. .
မိတ်ဆွေ တွေကလည်း စက်လှေခါး အတက်မှာဘဲ ဈေးနှုန်းနဲ့ဆိုဒ်မေးရအောင်ပြောပါသေးတယ်. .ဓာတ်ပုံ ဆရာ ကရပါတယ် . .အစ်မ ပုံမှန်ဈေးဘဲယူမှာပါဆိုပြီး ဈေးနှုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံဆိုဒ်ကို မပြောပါဘူး. . ဒါနဲ့ ဆိုဒ် အသေးနဲ့ ၇၀၀ တန် ၅ ပုံဘဲရိုက်မှာဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်
ရိုက်ပြီပေါ့ . .ဟိုနေရာလှတယ်ဒီနေရာလှတယ်ဆိုပြီး. . .အစ်မ တို့ ကြိုက်တဲ့ပုံရွေးရအောင်လို့ဆိုပြီး အမှတ်တမဲ့ တွေကော အမှတ်တရတွေကော့ မရိုက်ဘူးပြောတဲ့ကလေးမလေးမသိအောင်တောင် ရိုက်တဲ့ ပုံတွေပါသေးတယ်. . .ရိုက်ပြီးမှ လာပါပြီ. . . .တောင်းတာက ဓာတ်ပုံရိုက်ခ ခုနှစ်သောင်းခွဲတဲ့ဗျာ. .
ဟဲ့ ငါတို့က နင့်ကို ပုံသေး ၅ ပုံရိုက်မှာဘဲပြောတယ် . .ပုံတွေအများထဲကရွေးမယ်ပြောတော့လည်းဝေ့လည်ကြောင်ပတ်နဲ့အရွေးမခံဘူးလေ..ဓာတ်ပုံ ကူးဖို့ကဒ်ပေးလိုက်ပြီ မရတော့ဘူးပြောတယ် .နောက်ဆုံး မနည်းပြောပြီး တဝက်ကြေး ၃သောင်းကျော်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ မိတ်ဆွေ က ပြောပြခဲ့ပါတယ်. .
ဒါနဲ့ ကျွန်တော် လည်း ဓာတ်ပုံ ရွေးတဲ့နေရာလိုက်သွားတော့ ပုံတွေထုတ်နေပြီ ရိုက်တဲ့ပုံတွေလည်း တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာ ပုံမတူပါဘူး ဆိုပြီး ဟောက်စားလုပ်သေးတယ်. .ဈေးနှုန်း လည်း တရားဝင်ရေးထားတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်. . . .ထုပ်ပေးလိုက်ပါတယ် (( ၇၀၀ တန်လောက်ပုံသေး ၅ ပုံရိုက်မယ်ပြောတဲ့သူကို ))A4ဆိုဒ် ၁၀ ပုံနဲ့ ပုံသေး 5″ 7″လားမသိ ၅ ပုံ စုစုပေါင်း ၁၅ ပုံရပါတယ် ခင်ဗျာ. . .သို့ဖြစ်ပါ၍ မန္တလေးတောင် ဂေါပက လူကြီးမင်းများမှလည်း အထက်ပါကဲ့သို ဓာတ်ပုံရိုက် ဆရာများ ဧည့်သည် များကို နားလှည့်ပါးလှည့် လိမ်ညာလှည့်ဖြားပြုလုပ်ချင်းမှရှောင်ကြဉ်စေရန် စည်းကမ်းတင်းကျပ်စွာထုတ်၍သတိပေး/ အရေးယူမှူများပြုလုပ်နိုင်ရန် အသိပေးတင်ပြအပ်ပါသည် ခင်ဗျာ.
ရေးသားသမျှအားလုံးကို တာဝန်ခံပါတယ်. .
ကိုစိုးဝင်းအောင် .09797297068 မန္တလေး
crd – Sm1977
မန်တလေးမွို့ကို သိက်ခာခြ နသေော မန်တလေး တောငျမှ ဓာတျပုံဆရာ
ကြှနျတေျာ့ မိတျဆှေ ၃ယောကျကို ယနေ့ မန်တလေးတောငျ ကိုအလညျလိုကျပို့ခဲ့ပါတယျ ခွထေောကျနာ နလေို့တောငျထိပျကို လိုကျမပို့ဖွဈခဲ့ပါ.
တောငျတကျဂိတျ မှာမေးတဲ ဓာတျပုံ ဆရာ ကို ဓာတျပုံ ရိုကျဖို့ချေါလိုကျပါတယျ. .မိတျဆှေ တှကေိုလညျး အမှတျတရဖွဈအောငျ ပုံသေး ၅ ပုံလောကျဘဲရိုကျပါ . . .တဈပုံကို ဆိုဒျပျေါမူတညျပွီး ရ၀၀ /၁၅၀၀ လောကျဘဲရှိတယျပွောပွီး ဓာတျပုံ ဆရာ ကို ၅ ပုံလောကျဘဲရိုကျပေးဖို့ကြှနျတျောမှာလိုကျပါသေးတယျ. .
မိတျဆှေ တှကေလညျး စကျလှခေါး အတကျမှာဘဲ စြေးနှုနျးနဲ့ဆိုဒျမေးရအောငျပွောပါသေးတယျ. .ဓာတျပုံ ဆရာ ကရပါတယျ . .အဈမ ပုံမှနျစြေးဘဲယူမှာပါဆိုပွီး စြေးနှုနျးနဲ့ဓာတျပုံဆိုဒျကို မပွောပါဘူး. . ဒါနဲ့ ဆိုဒျ အသေးနဲ့ ရ၀၀ တနျ ၅ ပုံဘဲရိုကျမှာဆိုပွီး ပွောခဲ့ပါတယျ
ရိုကျပွီပေါ့ . .ဟိုနရောလှတယျဒီနရောလှတယျဆိုပွီး. . .အဈမ တို့ ကွိုကျတဲ့ပုံရှေးရအောငျလို့ဆိုပွီး အမှတျတမဲ့ တှကေော အမှတျတရတှကေော့ မရိုကျဘူးပွောတဲ့ကလေးမလေးမသိအောငျတောငျ ရိုကျတဲ့ ပုံတှပေါသေးတယျ. . .ရိုကျပွီးမှ လာပါပွီ. . . .တောငျးတာက ဓာတျပုံရိုကျခ ခုနှဈသောငျးခှဲတဲ့ဗြာ. .
ဟဲ့ ငါတို့က နငျ့ကို ပုံသေး ၅ ပုံရိုကျမှာဘဲပွောတယျ . .ပုံတှအေမြားထဲကရှေးမယျပွောတော့လညျးဝလေ့ညျကွောငျပတျနဲ့အရှေးမခံဘူးလေ..ဓာတျပုံ ကူးဖို့ကဒျပေးလိုကျပွီ မရတော့ဘူးပွောတယျ .နောကျဆုံး မနညျးပွောပွီး တဝကျကွေး ၃သောငျးကြျောပေးခဲ့ရတယျလို့ မိတျဆှေ က ပွောပွခဲ့ပါတယျ. .
ဒါနဲ့ ကြှနျတျော လညျး ဓာတျပုံ ရှေးတဲ့နရောလိုကျသှားတော့ ပုံတှထေုတျနပွေီ ရိုကျတဲ့ပုံတှလေညျး တဈနရောနဲ့တဈနရော ပုံမတူပါဘူး ဆိုပွီး ဟောကျစားလုပျသေးတယျ. .စြေးနှုနျး လညျး တရားဝငျရေးထားတယျဆိုပွီးပွောပါတယျ. . . .ထုပျပေးလိုကျပါတယျ (( ရ၀၀ တနျလောကျပုံသေး ၅ ပုံရိုကျမယျပွောတဲ့သူကို ))A4ဆိုဒျ ၁၀ ပုံနဲ့ ပုံသေး 5″ 7″လားမသိ ၅ ပုံ စုစုပေါငျး ၁၅ ပုံရပါတယျ ခငျဗြာ. . .သို့ဖွဈပါ၍ မန်တလေးတောငျ ဂေါပက လူကွီးမငျးမြားမှလညျး အထကျပါကဲ့သို ဓာတျပုံရိုကျ ဆရာမြား ဧညျ့သညျ မြားကို နားလှညျ့ပါးလှညျ့ လိမျညာလှညျ့ဖွားပွုလုပျခငျြးမှရှောငျကွဉျစရေနျ စညျးကမျးတငျးကပျြစှာထုတျ၍သတိပေး/ အရေးယူမှူမြားပွုလုပျနိုငျရနျ အသိပေးတငျပွအပျပါသညျ ခငျဗြာ.
ရေးသားသမြှအားလုံးကို တာဝနျခံပါတယျ. .
ကိုစိုးဝငျးအောငျ .09797297068 မန်တလေး
မန္တလေးမှာ စုံတွဲတစ်တွဲကို ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်တဲ့ ရုပ်သံ လူမှုကွန်ရက်တွင် ပျံ့နှံ့လာ
ဓမ္မာစရိယ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုနေရင်း ရဟန်းတစ်ပါး ရုတ်တရက် ပျံလွန်တော်မူ
လူတွေကို ကူညီခဲ့တဲ့ ပရဟိတသမားတစ်ယောက် ဒုက္ခရောက်ရင် ကူညီမဲ့သူ မရှိတော့ဘူးလားဗျာ
မုန့်ဖက်ထုပ်သည် အဖွားကြီး မသေပါစေနဲ့ဗျာ လူသားချင်း စာနာပြီး မုန့်ဖက်ထုပ်သည် အဖွားကို ဆိုင်ကယ်နဲ့ ကူတင်လာပေးတဲ့ ညီမလေး ကံကောင်းပါစေ